मन्त्रीज्यूको होमवर्क - परिहास - नेपाल
केही दिन भयो, मन्त्रीजी रातरातभरि काम गरिरहेको । उनलाई पहिले यसरी काम गरेको कसैले देखेको थिएन । अरु मात्र होइन, उनकी आफ्नै श्रीमतीले पनि यसरी राती खटिएर काम गरेको देखेकी थिइनन् । कार्यकर्ता चकित हुने त भइहाले । मन्त्रीजी रातीसमेत जाग्राम भई काम गरिरहेको देखेर कार्यकर्तालाई लाग्यो– लौ, अबचाहिँ देशमा केही होलाजस्तो छ । मन्त्रीजीले रातीसमेत काम गर्न थालेछन् ।
उता श्रीमतीजीलाई लागेछ– ठूलै परियोजना पो सुरु हुन थालेछ कि क्या हो ? हो भने त राम्रै भो, कमिसन पनि मोटै ल्याउनु होला ।
तर काम के हो ? राती–रातीसमेत काम गर्नुपर्ने किन हो ? त्यो सोध्ने आँट भने कसैलाई भएन । तैपनि एक दिन सानी छोरीले त्यो सोधिहालिछन्, ‘ड्याडी, तपाईं किन अचेल रातीराती पनि पढिसिनुहुन्छ ?’
मन्त्रीले भने, ‘यो ड्याडीको होमवर्क हो छोरी । होमवर्क गर्दैछु ।’
‘होमवर्क ? !’, छोरी खितखित हाँसिन्, ‘ड्याडीलाई त सबैले सर भन्नुहुन्छ । सरले पनि होमवर्क गर्नुपर्छ र ? सरले गरेको होमवर्क कसले चेक गर्छ नि ?’
मन्त्रीले जवाफ दिए, ‘हेडसरले ।’
‘अनि कहाँ बसिसिन्छ त ड्याडीको हेडसर ?’ छोरीले अर्को प्रश्न तेर्स्याइन् ।
‘बालुवाटारमा,’ मन्त्रीजीले छोटो जवाफ दिए, ‘ड्याडीले अहिले गरेको होमवर्क जम्मै बालुवाटार गएर हेडसरलाई चेक गराउनुपर्छ । ल अहिले तिमी जाऊ, ड्याडीलाई डिस्टर्ब नगर हस् ।’
छोरी गइन् । मन्त्रीजी फेरि होमवर्कमै व्यस्त हुन थाले । जसरी हुन्छ, राम्रो रिपोर्ट जो बनाउनु थियो ।
प्रकाशित: श्रावण ३, २०७६